Su'aallo badan oo ku geedaaman Musharaxnimada Deni | KEYDMEDIA ONLINE
Deni ayaa sida Keydmedia Online ogaatay dhawaan isku soo sharixi doono xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Su'aallo badan ayaa ka taagan Musharaxnimada Deni, iyadoo guuxa dadweynaha uu sii xoogeystay markii Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan uu xaqiijiyay in Madaxweynaha Puntland uu u tartami doono xilka Madaxweyanaha Soomaaliya.
Arintan waxaa xaqiijiyay Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, oo qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in Deni uu yahay Musharax Isqarinaya, oo hoos kawada ololihiisa doorashadda, isagoo hadda safar ugu maqan Imaaraadka, oo xiriir dhaw kala dhaxeeya.
Deni ayaa sida Keydmedia Online xog ku heshay raadinaya taageerro xoog leh, oo ka helo Jubbaland iyo Imaaraadka si uu ugu guuleysto tartanka xilka Madaxweynaha dalka Soomaaliya, waxaana la filayaa in marka lasoo doorto Xildhibaanada uu iska-casilo xilka uu hadda hayo ee Madaxweynaha Puntand.
Maadama sanadkan ay aad u yaryihiin Mushariixiinta Daarood, Deni ayaa u arka fursad uu ku guuleysan karo inuu tartanka soo galo, isagoo ku tashanaya Xildhibaanada Puntland iyo Jubbaland laga soo dooranayo oo sidii codadkooda ku hali lahaa dedaal badan ugu jira.
Wasiir Jamaal ayaa daboolka ka qaadey in Deni uu faragelin ku hayo doorashadda Xildhibaanada Puntland ku matelaya Baarlamaanka 11aad, isagoo ka shaqeynaya sidii uu kusoo saari lahaa xubno isaga daacad u ah, oo u codeeya doorashadda Oct 10.
Deni horey ayuu ugu tartamay xilka Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna kamid ahaa musharixiintii loolanka la galay Farmaajo Feb 8, 2017, taasoo uusan ku guuleysan maadaama jab kala kulmay dhinac Musharixiinta kale ee Daarood, sida Cumar C/rashiid.
"Musharaxa kaliya ee Imaaraadka uu wato hadda waa Saciid C/llaahi Deni, maadaama uu yahay siyaasi dalkaas degan oo Ganacsi ku leh, mudo dheerna ku noolaa, islamarkaana aad u difaacay Imaaraadka markii dalka laga eryay," ayuu yiri siyaasi Keydmedia Online la hadlay, oo kasoo jeeda Puntland, kaasoo magaciisa ka gaabsaday.
Imaaraadka ayaa gacanta ku haya Ciidamada Puntland, gaar ahaan PMPF-ta, waxayna Shirkadda DP World maamushaa dekedda Boosaaso, oo maalgashi xoog leh ku sameysay.